Wax ka iibsiga Masku / Maskun Blogi / Masku.com
Etusivu Maskun Blogi Wax ka iibsiga Masku
Wax ka iibsiga Masku
Ku soo dhowow Masku!
Waa tan warbixin kooban oo ku saabsan Masku oo Soomali ah
Masku wuxu caan ku yahay haynta xulashada ugu weyn ee alaabta guryaha ee Finland iyo qiimaha ugu hooseeya suuqa. Masku wuxu ay diyaar u yahay adeegaaga wuxuna leeyahay shabakad ballaaran oo dukaammo ah oo ku baahsan waddanka oo dhan iyo dukaanka internetka oo kuu shaqaynaya 24ka sacadood iyo wiiga oo dhan www.masku.com. Qiimuhu waa isku mid dukaamada iyo online-ka!
Agabkayaga gaarka ahi waxay ka kooban yihiin xalka dhammaan heerarka nolosha iyo waliba dhammaan naqshadaha kala ah noocyadi horre, kuwa Iskaandaniifiyanka iyo ka bilow kuwa casriga ila kuwi horre iyo kuwa jacaylada miyiga.
Inta ugu badan agabkayaga guryaha waxa laguugu qaabayn karaa sida aad jeceshahay. Waxaan si wada jir ah u qaabayn doonnaa qalabka guriga, inaka oo ka dhigayna cabbirrka sida qolkaagu yahay, midabada ku habboon gudahaaga, oo aan fulin doonnaa shuruudahaaga ku saabsan lugaha, adkaanta kursiga ama furaashka, iyo sidoo kale nooca dunta ee ay ka samaysan tahay.
Ka fiiri dalabyadeena qiimaha hoose halkan!
Masku wuxu bixiyaa adeegyo lagugu keenayo qalabka guriga si fudud, adeegyo dalbasho iyo alaab xidhxidhaad, siddo kale qalabki guriga ee horrena waa lagaa saarayaa. Waxaad sidoo kale dalabaadkaga ka soo qaadan kartaa inta badan bakhaarradeenna iyo bakhaarka keydka ee ku yaal Mäntsälä. Waxaan u soo dirnaa badeecadaha cabbirka yar goobaha laga qaadanayo si loogu baceeyo . Keenistuna waa 19 yuuro.
Goobuhu way ku kala duwan yihiin helitaanka adeegyada alaab xidhxidhida. Weydii wixii macluumaad dheeri ah adeegga macaamiisheena ama dukaanka Masku ee kuugu dhow.
Wakhtiga lagu keenayo alaabta waxa lagu sheegaa kaadhka alaabta waxaana lagu xaqiijin doonaa emaylka markii la dalbado. Xafiiska boostada ayaa kaala soo xiriiri doona taleefon kahor inta aan lagu keenin. Markaad doorato inaad dalabkaaga ka qaadatid dukaan, bakhaarka keydka ama goob laga qaato, farriin SMS ayaa lagugu soo ogeysiinayaa markii dalabkaagu yimaado si aad u qadato.
Dhinaca maaliyada, waxaad heleysaa muddo wakhti ah oo habboon si aad u bixiso lacagta waxa aad iibsatay. Waxaad sidoo kale ku bixin kartaa kaararka aqoonsiga bangiga onlaynka, Debit iyo kaararka Amaahda, iyo waliba xawilaada bangiga. Dhammaan hababka lacag bixinta ee la heli karo waa ammaan wana amni isticmaalkoodu.
Dukaamadeena, waxaad sidoo kale ka dooran kartaa inaad lacagta ku bixiso habka haftada ah ee Nordea Tuohi, qaan-sheegta Avarda iyo in aad ku bixiso lacag kaash ah. Waxa sidoo kale loo adeegsan karaa hab lacag bixinta dukaamadeenna kharashaadka shakhsiyadeed ee ay soo saartay Kela ama dawladaha hoose.
Siyaasada soo celinta iyo isdhaafsiga
Macaamiil ahaan, waxa aad xaq u leedahay inaad soo celiso alaabada laga soo iibsaday dukaanka internetka 14 maalmood gudahood laga soo bilaabo markii la helo.
Sheyga waa in aan la isticmaalin, aanu cillad lahayn wana in ay ku jiraan baakaddii asalka ahayd. Xidhmada la iibiyay waa inay ahaataa mid dhamaystiran oo ay ku jiraan dhammaan qaybihii, dukumiintiyadi iyo alaabada baakooyinka asal ahaan lagu soo daray xirmada.
Haddii alaabta la soo celiyay waxyeello la gaadhsiyay ama qiimaheedi uu hoos u dhacay, Maskun Kalustetalo waxa ay xaq u leedahay inay ku dallacdo macmiilka kharashaadka shaqsiyeed ee ay sababtay waxyeeladu. Macaamilku waxa uu mas'uul ka yahay kharashka soo celinta.
Xanibaadaha ku saabsan soo celinta iyadoo la raacayo Cutubka 6aad, Qeybta 16aad ee Sharciga Ilaalinta Macmiilka: Alaabaha nadaafada iyo kuwa sidda dhow loo isticmaalo lama soo celin karo ka dib marki laga furo bacdi ay ku jireen, sababta oo ah alaabtaas dib looma iibin karo dabcigooda dartiis. Tusaalooyinka badeecooyinka noocan oo kale ah waa barkimooyinka, busteyaasha, furaashyada isbiriinada.
Si aad usoo celiso, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha.
Masku iyo warshadaha alaabta guryaha ee aan matalayno waxa ay u hoggaansan yihiin heerarka tayada adag ee lagu taliyay laguna isticmaalo warshadahaha alaabaha guryaha. Haddii aad ku aragto alaabta cillad, fadlan isla markiiba la socodsii adeegga macaamiisheena.
Cabashooyinka ku hoos jira damaanada waa in la soo sheegaa ugu dambeyn hal (1) bil laga bilaabo waqtiga la helay cilada ama ay ahayd in la helo. Macmiilka waxaa ku waajib ah inuu baaro alaabta isla marka u helo. Sheyga waa in kaliya lagu adeegsadaa deegaanka iyo sida loogu talagalay.
Alaabta gurigu sidoo kale waxay u baahan yihiin boodhka in laga tirtiro, la nadiifiyo oo la daryeelo. Bakhaaradeena iyo dukkaamadeena onlaynka, waxa aad ka heli kartaa alaabaha Fiican ee lagu maydho Maaska iyo tilmaamaha aan ku talino ee aad raaci karto si aad u daryeesho maryaha iyo maaska. Haddi la daryeelo, alaabta guryuhu waxa ay ahaan doonan qaar sanado badan fiicnaada oo aanay muunadoodu is badelin.
Haddaad rabto, waad u iibsan kartaa Qalabka Ilaalada Masku alaabtada guriga ee cusub, oo ku siinaysa dammaanad 10 sano ah oo aan laga goyn karin lacag-bixin hal mar ah.
Alaabada aan lagu cayminin dammaanada
Duugobida caadiga, kala-bax, laadlaadsi, kala-jiid, midab gadis ama diismid, iyo sidoo kale waxyeelada uu sababay macmiilku inta lagu jiro safarka, xidhxidhitaanka ama kaydinta, kumana jiraan damaanada. Tusaale ahaan, maasku waa shey dabiici ah oo kala jiidma, kaasoo keenaya waxa loo yaqaan laalaab. Kala-baxa dharka ee u muuqda ilaa xad. Kuwani waa astaamo ay leeyihiin agabyada kala duwan.
Dammaanad qaadku wuxuu khuseeyaa oo keliya alaabada loo iibsaday isticmaalka gaarka ah.
Haddii sheyga lagu keenay uu cilladaysan yahay ama uu leeyahay cillad la dammaanad qaaday, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha. Si hawsha loo dedejiyo, fadlan soo raaci lambarka qandaraaska iibka oo ka bilaabmaya xarafka M ee dalabka, sawirada dhaawacyada iyo, haddii ay dhacdo waxyeelo gaadiid, sawirka waraaqda alaab rarista.
Mar alla markii aan helno cabashadaada, adeegga macaamiisheena ayaa kula soo xiriiraya sida ugu dhaqsaha badan. Adeegga macaamiishayadu wuxuu kaala shaqeyn doonaa habka ugu macquulsan ee lacag soo celinta iyo in qaab kiis-kiis ah xal loo raadiyo. Marar badan, sixitaanka ciladdu ma aha oo kaliya waxa ugu macquulsan, laakiin sidoo kale waxa weeyan ikhtiyaarka ugu fudud.
Fadlan la soco in cabashadu ay la xiriirto badeecad burburtay inta lagu gudajiray gaarsiinta ama cillad ka timi marki la samaynayay ee ma aha, tusaale ahaan, ciladaha ay sababaan duugista iyo jeexitaanka caadiga ah iyo arrimaha ay keenayso nolosha adeegga oo dheer. Cabashada waa in la sameeyaa sida ugu dhaqsaha badan ka dib markay dhibaatadu muuqato. Gaar ahaan, shirkadda gaadiidku waa in lagu ogeysiiyaa 7 maalmood gudahooda gudbinta cabashada.
Telefoon: 0201 211 200
Waxay furan tahay Isniin ilaa Jimce 8 subaxnimo ilaa 8-da fiidnimo, Sabtida 10-ka subaxnimo ilaa 6-da fiidnimo.
Telesales iyo Chat
Telefoon: 0201 211 211
Waxay furan tahay Isniinta ila Sabtida 10 am ilaa 10 pm, Axada 12 pm ilaa 10 pm.
Qiimaha wicitaanada Masku EUR 0.08 halkii wac + EUR 0.17 daqiiqaddii.
Adeegga macaamiisha waxaa lagu heli karaa luuqadaha Finnishka, Iswidishka iyo Ingriisiga. Waxaad luuqadaha adeegga bakhaarka ka heli kartaa bogagga bakhaarka: Macluumaadka xidhiidhka iyo saacadaha furitaanka bakhaarka